Public Health in Myanmar: Hepatitis B
good that there isaHepatitis B blog. At Mae Tao Clinic we just have startedaHEPATITIS B ALERT ACTION GROUP.We are developingastrategy to reduce the transmission of HBV by immunising Newborns of HBV+ and HIV+ mothers. Also we are immunising all our HBsAg neg staff.
I am looking for information in Burmese language about Hep B vaccination programm. Do you have any references in Burmese language please?
[သင့်အနာဂတ်ကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ် ...
အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီပိုးဟာ ကူးစက်မှုအလွယ်ဆုံးနှင့် အသည်းရောဂါ အဖြစ်အများဆုံး ဖြစ်တဲ့အတွက် ကုမ္ပဏီကြီးတွေ၊ ဟိုတယ်ကြီးတွေမှာ အလုပ်လျှောက်ဖို့ ဒါမှမဟုတ် နိုင်ငံခြားမှာ ပညာသင်သွားဖို့ အလုပ် သွားလုပ်ဖို့ ဆေးစစ်ကြည့်တဲ့အခါ သွေးထဲမှာ ဘီပိုးတွေ့ခဲ့ရင် လုံးဝပယ်ချခြင်း ခံရပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်မိသားစုမှာ အသည်းရောင် အသားဝါရောဂါပိုး ရှိနေရင် သင့်ရဲ့ အလုပ်အကိုင်၊ စီးပွါးရေးနှင့် ပညာရေး စတာတွေ အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။] တခြားနိုင်ငံတွေမှာ အသည်းရောင် အသားဝါ ဘီပိုးရှိသူတွေကို ဒီပိုစ့်လေးမှာ ဖေါ်ပြထားသလို ကန့်သတ်တာတွေ ရှိချင်ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ စင်္ကာပူနိုင်ငံမှာတော့ HIV နှင့် အဆုတ်ရောဂါပိုးတွေကိုပဲ အဓိကထားပြီး စစ်ဆေးပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်က Chronic Hepatitis ပါ။ ဒါကြောင့် လက်ရှိ ကျွန်တော့်အတွေ့အကြုံလေးကို ကိုယ်လို ညီအစ်ကို၊ မောင်နှမတွေသိရအောင် ပြန်ပြီး Share လုပ်တာပါ။
ဘီပိုးကာကှယျ​ဆေးထိုးတာ ပထမအွကိမျထိုးပီးတလွပညျ့ရငျ​နောကျတလုံးထိုးဖို့ တလဆိုတာ ရကျ၃၀နဲ့တှကျတာလား ၃၁ရကျနဲ့တှကျတာလား.တရကျလို တရကျ​​ကေျြာ​ရော ထိုးလို့ရပါသလား